Izincwadi Zothando Ezine-Emojis ▷➡️ Abalandeli ▷➡️
izinhlamvu zothando nge-emojis
izinhlamvu zothando nge-emojis. Uma ufuna ukudlulisa a imizwa kumlayezo nge-smartphone noma ezingxoxweni ezingokoqobo ezinkundleni zokuxhumana, kungenzeka ukuthi usuyisebenzisile kakade inhliziyo yakho, isandla sokushaphu, izintende, noma ubuso obuphuzi obujabulisayo. Ukusesha kwe-Google kwakamuva kuthole ukuthi igama elithayiphiwe kakhulu nge-SMS noma ingxoxo bekungelona igama, kodwa idizayini yenhliziyo ebomvu. Ngokusho kwenkampani, isithombe nokuhlukahluka kwaso kubonakala izikhathi eziyizinkulungwane nezigidigidi ngosuku emhlabeni jikelele. Ukudla, izilwane, ezokuthutha, abantu, imizwa. Zonke lezi zithombe ezimibalabala ezivela njengenketho kukhibhodi yakho zibizwa I-Emojis.
1 Izinhlamvu zothando ezinama-Emojis ➡️
2 Izinhlamvu zothando ezinama-Emojis Ziyini?
2.1 Indaba ethi "Izinhlamvu Zothando ezinama-Emojis"
3 Izincwadi Zothando ezinama-Emojis kwezokuthengisa
3.1 1. Yazi ama-Emojis
3.2 2. Yazi izincazelo
3.3 3. Hlala ubukele izindaba
3.4 4. Sebenzisa ama-Emojis ukwenza umkhiqizo wakho ube ngumuntu
3.5 5. Gwema imilayezo ebethelwe noma uyichaze kahle
3.6 6. Yazi ukuthi kufanele usebenzise nini
3.7 7. Sebenzisa Izincwadi Zothando ezinama-Emojis ahambisana nomlayezo wakho
4 Izincazelo ezisetshenziswa kakhulu i-Emojis kwi-Intanethi
4.2 Ekhala ehleka
4.4 Ehleka ejuluke ebanda
4.5 Ubuso obumamatheka ngamehlo amomothekayo
4.6 Ubuso obumamatheka nge-halo
4.7 Phindela emuva
4.9 Ubuso obudaliwe
4.10 Ubuso obumamathekayo obunenhliziyo emehlweni
4.11 Efuthe kiss
4.12 Ekhombisa ulimi
4.13 Ubuso bukaNerd
4.14 Ingane enezibuko zelanga
4.15 Ukumamatheka eceleni
4.17 Ubuso obudangele
4.18 Ubuso obukhathazekile
4.19 Ukukhala kobuso
4.20 Ekhala kakhulu
4.23 Ememeza ngokwesaba
4.25 Umjuluko obandayo
4.26 Ubuso ngaphandle komlomo
4.27 Ubuso obungathathi hlangothi
4.29 Ahlahle amehlo
4.34 Ubuso obumamathekile obumamatheka
4.35 Izandla aziphakame
4.39 Isandla ebusweni (Facepalm)
4.40 Enyakazisa amahlombe
5 Ama-Emoji aguqulelwe kwaba ama-meme noma anencazelo ekabili
5.1 I-Peach Emoji
5.2 Ubuso benyanga obugcwele
5.3 I-emoji yenyanga emnyama
5.4 I-emoji epholile
5.5 I-Emoji yesitshalo seqanda
5.6 Ubuso obunokubukeka kokunqoba
5.7 Umuntu onezandla ezihlangene
Izinhlamvu zothando ezinama-Emojis ➡️
Ukuxhumana akukhona nje ngamagama akhulunywayo noma abhaliwe, ngoba sibuye sixhumane ngaphandle kokukhuluma, okungukuthi, ngaphandle kokusebenzisa ulimi. Ngokunembayo, ngesimo sobuso bethu, ukuthinta komzimba wethu, ulimi lwethu lomzimba kanye nephimbo. Ukuxhumana kwethu kuya ngokuya kuba ngokwedijithali. Sibhala ama-imeyili futhi sixoxe WhatsApp, Fb, Instagram noma Snapchat. Esingakwazi ukukuveza empilweni yangempela ngamagama, noma ngokungakhulumi, kushintshaniswa ama-Emoji nemibhalo emifushane. Lokhu kwengeza imizwa embhalweni futhi kungavimbela ukungezwani. Abantu abaningi bathi bangakwazi veza imizwa kangcono nge-Emojis kunamagama.
Ngokungeziwe ezenzweni zobuso ezihlukahlukene kanye nokuthinta komzimba, kukhona nama-Emoji amele izinto. Lokhu ngokuvamile kusiza omunye ukuba aqonde isimo kanye nomongo waso. Ukuziphendukela kwemvelo kwe izinhlamvu zothando nge-emojis Lethe izinzuzo eziningi kumabhrendi kanye nezinkundla zokuxhumana. Enye yezinkulu izinzuzo zokusebenzisa Izithonjana kanye ne-Emoji ukufinyeza umlayezo, okungukuthi, ukwenza okuqukethwe yi-a umbhalo uyashesha futhi uqonde kakhudlwana.
Singasho ukuthi cishe akunakwenzeka ukwenza okuthunyelwe futhi ungafaki i-Emoji, akunjalo? Uma ungomunye walabo abathandayo izinhlamvu zothando nge-emojis, kodwa awazi ukuthi zisetshenziswa kanjani ngobuchule, sizokusiza! Ibonisa ukuthi lezi zithombe ezinemifanekiso zihlume kanjani nokuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokuzisebenzisa ezincwadini zakho.
Izinhlamvu zothando ezinama-Emojis Ziyini?
Igama "I-Emoji » iphuma enhlanganweni ethi «kanye futhi» (絵), okusho isithombe ngesi-Japanese, kanye ne-"moji» (文字), okusho ukuthi uhlamvu. Okusho ukuthi, ziyizimpawu ezimele umqondo, igama noma umusho ophelele.
Lezi zimpawu zinokubukeka kwezinkulumo, izinto, izilwane, izinhlobo zesikhathi, njll. Baphenduke umkhuba ngokusetshenziswa okwandayo kwama-smartphones.
Namuhla ziyingxenye yokubhala futhi zisathathwa njengolimi olusha. Isibonelo, igama lonyaka izinkulungwane ezimbili neshumi nanhlanu, elikhethwe yisichazamazwi se-Oxford, lalithi !
Okuningi ukunakekelwa! Ungaphambanisi izinhlamvu zothando nge-emojis con Izithombe-mzwelo / Izithonjana. Nakuba ama-Emoji eyizinhlamvu ezizimele zodwa, izithonjana ziyizithombe-mzwelo noma izimpawu ezenziwe ngezinhlamvu zekhibhodi, ezifana nokuthi (-: noma <3.
Indaba ethi "Izinhlamvu Zothando ezinama-Emojis"
I-Los izinhlamvu zothando nge-emojis Sebeyingxenye yesiko lethu futhi usuku nosuku kunzima ukukhumbula ukuthi bavela nini futhi kuphi, akunjalo??
Kodwa indaba yindala kakhulu kunalokho ebukeka ngayo futhi iqala ngeshumi nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye, e-Japan, njengoba umsuka wegama elithi "Emoji" usuvele usitsho.
Konke kwaqala ngesikhathi inkampani yomakhalekhukhwini i-NTT DoCoMo ithuthukisa i-I-mode, uhlobo lwephakheji yolwazi lwamaselula, okuhlanganisa iposi, isimo sezulu, izindaba kanye nokufinyelela ku-inthanethi, okwakuthuthuke kakhulu ngaleso sikhathi futhi ifuna ukuguqula indlela amaJapane ayexhumana ngayo.
U-Shigetaka Kurita, omunye wabasebenzi be-NTT DoCoMo ababambe iqhaza kuphrojekthi ye-I-mode, wabona ukuthi ukuxhumana kwakubanda futhi ngezinye izikhathi okunzima kangakanani ngokukhawulela imisho ebhalwe kumaselula kuphela, futhi waqala ukubheka indlela yokwenza imilayezo ibe ngumuntu.
Kodwa akekho kubo owavumayo futhi kungaleso sikhathi lapho u-Kurita, owayengeyena umklami, waqoqa iqembu elincane futhi, ngomkhawulo wamaphikseli angu-12 × 12, wasungula i-Emojis yokuqala engu-176 enomlando.
Lapho umbhali we-Emojis ekugcineni ethula imiklamo yasekuqaleni ezinkampanini ezinkulu zobuchwepheshe, wayethemba ukuthi zizozithuthukisa ngesakhiwo sazo, kodwa lokho akwenzekanga: izimpawu zingene kwimodi mina ngokuqondile ngendlela ezaziklanywe ngayo ekuqaleni.
Lokhu kugcine sekukhiqize izinhlamvu eziningi ezahlukene nesiyaluyalu sangempela: inani lama-Emojis lifinyelele ku-800! - eyaqala ukuxazululwa ngo-2005, lapho inkampani ngayinye yanquma ukwenza imephu ukuthi yiziphi izinhlamvu ezisetshenzisiwe futhi izame ukumisa izinga phakathi kwabo.
Kulungile, kodwa zavela kanjani "i-Emoji Love Letters" e-Japan futhi zathatha umhlaba?
Ngokunikezwa isifiso somphakathi owawufuna ukuxhumana usebenzisa izimpawu nobuso obunobungane, U-Apple ukhiphe ama-Emojis kulimi ngalunye ngezinkulungwane ezimbili neshumi nanye, ngokwethulwa kwe-iOS.
Futhi lokho kwaba ukuqala komkhuhlane njengoba sikwazi namuhla: I-Google kanye ne-Windows bazame ukwenza ama-Emojis abo ukuthi agqugquzelwe idizayini yomncintiswano.
Namuhla, i izinhlamvu zothando nge-emojis Ziyingxenye yesiko, futhi zisetshenziswa kusukela ekuxhumaneni kwansuku zonke kuye ekuxoxeni izindaba, njengasendabeni yencwadi ethi Emoji Dick, eguqule indaba evamile ka-Moby Dick kusetshenziswa ama-Emojis kuphela.
Izincwadi Zothando ezinama-Emojis kwezokuthengisa
Ngokuthandwa okukhulu kwe izinhlamvu zothando nge-emojis kanye nendlela ezifakwe ngayo emasikweni omhlaba, abathengisi abahle babone amathuba amaningi lolu limi olungawaphatha ekuxhumaneni namakhasimende abo.
Futhi akukhona nje ngezinkulungwane zeminyaka! Njengoba sibonile izibalo zesihloko sokugcina, i Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nambili abasebenzisi be-inthanethi namuhla asebenzisa ama-Emojis.
Naphezu kokuba umkhuba oqinile ngempela, kuyadingeka ukuba uqaphele ekusetshenzisweni kwawo, ungenzi ihaba noma ubangele ukungezwani. Ngakho-ke, silethe ezinye amathiphu wokuthi usebenzise i-emojis ekukhangiseni yenkampani yakho:
Lesi isinyathelo esibalulekile ngaphambi kokuzindla nganoma yikuphi ukuxhumana, njengoba sihlala sixoxa futhi kuzo zonke izimo lapha kuwebhu yewebhu.
Ngaphambi kokuthi ucabange ukuthi yini ozoyisho nokuthi ungayisho kanjani, yazi ukuthi umuntu wakho uyathinteka yini kukho. ukusetshenziswa kwe-Emojis. Ingabe izethameli zakho ziyingxenye yamaphesenti angu-8 namanje angakaqashi futhi azifanise nabalingisi?
Kulo msebenzi wokucwaninga nokuhlola. Bona ukuthi yiluphi uhlobo lokuxhumana olusabela kakhulu kokuthunyelwe kwakho nokuthi kungena kanjani kukho.
Enye yokwehluleka okukhulu uku sebenzisa i-emoji kwezokuthengisa kuwukuzisebenzisa ngaphandle kokwazi ngempela incazelo. Akuwona wonke umuntu ongamela lokho okucabangayo, ngakho-ke kubalulekile ukwazi kahle ukuthi ukhuluma ngani.
Ithiphu elihle ukusebenzisa i-Emojipedia ukuthola incazelo ye-Emojis ngayinye, kanye nokucwaninga abalingiswa abakhethiwe ezinkundleni zokuxhumana ukubona ukuthi abantu bazisebenzisa kanjani nokuthi bakusiphi isimo.
Kungenzeka ukuthi uke wazizwa, kodwa izinhlamvu zothando nge-emojis zivuselelwa njalo.
Futhi khumbula ukuthi umuntu wakho ubelokhu esebenzisa ini, ukuthi iziphi izinto ezithandwayo nokuthi yini engasasetshenziswa, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi ukuxhumana kwakho kushunwe ngolimi lokuthi ufuna ukufinyelela bani.
Ngakho-ke, kuyindlela enhle yokusebenzisa izinhlamvu zothando nge-emojis en ukusebenzisana kwesikhathi sangempela futhi uhlanganyele nezithameli zakho, ikakhulukazi uma lokho kuxhumana kungahlelekile kakhulu futhi kujabulisa, njengalapho othile encoma inkampani yakho noma okuqukethwe kubhulogi yakho noma inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Akuwona wonke umuntu ongakwazi ukuqonda kalula ukuthi izimpawu zisho ukuthini, ngakho-ke qaphela imilayezo ebhalwe ngekhodi ngokuphelele ngama-Emoji. Umlayezo wakho ungase ungangeni futhi ungase uphuthelwe ukwakha ukuxhumana nezithameli zakho.
I-Emoji esetshenziswe esimweni esibucayi ngempela, njengokuphendula kumbhikisho weklayenti lakho lesevisi ku-Twitter noma isitatimende esibucayi kakhulu, ingaba isibhamu onyaweni.
Qiniseka ukuthi i-Emoji ngeke idide noma icasule umfundi womlayezo wakho, futhi uyisebenzise ngokucophelela, ikakhulukazi kusevisi yamakhasimende.
7. Sebenzisa Izincwadi Zothando ezinama-Emojis ahambisana nomlayezo wakho
Ungalokothi usebenzise izinhlamvu zothando nge-emojis ukusebenzisa nje. Qiniseka ukuthi umsebenzi uzokwengeza emyalezweni wakho noma uhlobane nalokho ofuna ukukusho.
Lobu buso obujabule obubonisa amazinyo abo yi-Emoji ekahle yokuchaza injabulo noma injabulo yomlayezo owamukelwe. Lesi sithonjana esidumile besinathi kusukela ekuqaleni kwezinhlelo zokusebenza zemiyalezo esheshayo nezinkundla.
Kodwa ubuso bengelosi bungasetshenziswa ngendlela exakayo, ezenzweni noma ekuziphatheni okungekuhle kakhulu.
Ungangithathi serious! Le Emoji isetshenziselwa ukukhomba umlayezo olahlekisayo, oyindida noma ojabulisayo. Ngaphezu kwalokhu, kungamela ukuthi uthola okuthile okuyisicefe noma ungathandi ihlaya.
Lobu buso obunonya obucwayizayo bungabonakalisa isenzo sokusebenzisana noma imvume, futhi busetshenziswa njengophawu lokudlala ngothando. Ngokunjalo, lingasetshenziswa ukuveza "ok" elinikezwe umuntu, ihlaya noma indida kuye ngecala.
Lobu buso bokukhululeka ngakho konke kwahamba kahle! Lisetshenziswa lapho umuntu ejabule ngokuthi into engathandeki iphelile. Kungamela futhi ukuthi umuntu ukhululekile, akanakho ukukhathazeka.
Iveza uthando, uthando kanye nokubonga, futhi ivame ukusetshenziswa emilayezweni yothando.
Le Emoji ingasetshenziswa kolunye uhlobo lokuthi "Ngiyadlala", ukuze athambise amazwana ahlekisayo noma enze kucace ukuthi okuthile kushiwo okungafanele kuthathwe ngokungathi sína.
Izibuko ezinkulu, ukumamatheka okungajabulisi, namazinyo avele ngaphandle, le Emoji iyisimo esingokwengqondo somuntu ohlakaniphile. Isetshenziswa ngendlela ehlekisayo noma ebhuqayo, ukuveza ukuthi uhlakaniphe kangakanani.
Uma ufuna ukufundisa ubuhlakani, lena i-Emoji ekahle. Ingase futhi isetshenziselwe ukukhombisa indida nokunganaki kokuthile okukhulunywe ngakho. Ngaphezu kwalokhu, limelela ilanga, amaholide kanye nehlobo ogwini.
Lokhu kubukeka okucasulayo kuveza ukunganeliseki. Kubonisa ukuthi umuntu akashisekeli ngokuthile, ukuthi akanasithakazelo noma akakwamukeli.
Le Emoji isetshenziselwa ukusho ukuthi umuntu udabuke ngempela futhi ukhungathekile. Imele ukudabuka, ukuzisola nokuzisola.
Isetshenziswa lapho othile ezizwa ekhathazekile, engavikelekile futhi futhi engakhululekile. Kubonisa ukuthi umuntu ukhathazekile ngesimo esinzima noma isenzakalo esibalulekile.
Le Emoji Yeshiya Elikhalayo Nokukhala ibonisa isimo sobuhlungu bento ethile, yokuhlupheka. Ukuthi kusebuhlungu ukukhumbula okuthile. Ngokuvamile lisetshenziselwa ukuveza ukucasuka noma ukudumala ngokuthile.
Kule Emoji, izinyembezi ziphuma emehlweni kuhle kwe-cataract. Imele ukudabuka okukhulu, ubuhlungu noma ukunqotshwa. Phakathi kwama-Emoji adlulisa umuzwa wokudabuka noma wokuphoxeka, lena enye evame kakhulu.
Le Emoji isetshenziswa uma ucasukile, uthukuthele noma uthukuthele ngokuphelele ngokuthile. I-Emoji Yobuso Obuthukuthele iveza isimo esibi noma ukungakhululeki esimweni.
Isetshenziswa lapho umuntu edlikizekile, esimweni esingakhululekile noma enze iphutha. Veza ukuphoxeka, ukuthi udlula kokuthile okubangela amahloni kakhulu, noma ukusabela ekuncomeni noma umlayezo othophayo.
Lobu buso obethukile bukhuthazwe umdwebo othi The Scream, womdwebi waseNorway u-Edvard Munch. Kusho ukuthi umuntu uyesaba, uthuswa okuthile.
Lobu buso bumele umuntu owethukile futhi omangele. Ubonakala ushaqeke kakhulu futhi umangazwe isigameko esibi noma okuhlangenwe nakho okukhulu.
Imele ingcindezi noma ukukhathazeka, lapho izinto zenzeka ngendlela ehlukile kunokulindelekile. Ingasetshenziswa futhi uma ukhathele noma unokuningi okufanele ukwenze. Lokhu kumelela injabulo ngokukhululeka.
Le Emoji ibonisa ubuso obungabonisi nokubukeka okumaphakathi. Kusho ukuthi umuntu akanandaba nesimo. Njengomthetho ojwayelekile, isetshenziswa lapho okuthile kungenasithakazelo futhi kungekho nkulumo eyanele yokudlulisa lowo muzwa.
Le Emoji imelela ukuthi okuthile bekuyihlazo ngempela. Kuwukubonakaliswa kovalo noma ukuphoxeka. Kungasetshenziswa futhi njengokumomotheka okunecala kancane, okuvela kumuntu owenze into ewubuwula futhi ozama ukuxazulula isimo esishubile ngokwenza ubuso.
Le Emoji isetshenziselwa ukumela umuzwa wokudelela, indelelo noma intukuthelo ngothile noma into ethile eke yashiwo ngaphambili, ngisho nesithukuthezi ngomuntu noma isihloko. Kungasetshenziswa futhi ukukhomba ukuthi umyalezo othile wawunokubhuqa.
Le Emoji ibonisa umuntu oshonile ngenxa yokukhathala. Leli gwebu eliphuma ekhaleni liwuphawu lwe-manga ngokwayo, emele ukuthi umlingiswa ulala.
Le Emoji isho ukuthi lo muntu wayethukuthele kakhulu ngalokho okwakushiwo kangangokuthi wayengase abuye. Isetshenziswa njengendlela yokungavumeli okuthile.
Haleluya! Lezi zandla ezibekwe zibheke phezulu zisetshenziselwa ukubungaza okuthile noma ukuveza ukuthi umuntu ujabule ngokuthi into abeyilindile seyenzekile ekugcineni. Uphinde athi uyazijabulisa futhi uyasithokozela lesi sikhathi.
Hawu, kuhle ngempela! Le Emoji ibonisa izandla ezimbili ezishaya izandla futhi ngokuyinhloko isetshenziselwa ukuveza imvume nokubonga. Ingasetshenziswa futhi ngokubhuqa, uma kukhona okungakufanelanga ukushayelwa ihlombe!
Lesi sibhakela sisetshenziselwa ukuvusa umuntu noma ukusho ukuthi weneliswa ngomunye osohlangothini lwakhe. I-Fist Emoji ingenye edume kakhulu, esetshenziswa ngokufana ncamashi nesenzo sobungani esidumile empilweni yangempela, okungukuthi, ukubingelela umngane esikhundleni sokuthi "sawubona". Ngakolunye uhlangothi, kungabuye kuhunyushwe njengosongo lokushaywa.
Ngikubhekile! Lawa mehlo amabili asho ukuthi kukhona okubonwayo noma okuqinisekiswa kahle.
Lisetshenziswa uma uzwa noma ubona umuntu enza into ewubulima, kodwa lingasetshenziswa uma uzizwa "uphoxekile ngokunye".
Isetshenziselwa ukuveza imizwa ethi "Angazi ukuthi ngingakusiza kanjani" noma "Yenza ini, akunjalo?". Le Emoji Ye-Shrug ibonisa ukungazi, ukudideka, noma ukungabi nentshisekelo kokuthile. Iphuma kusithombe-mzwelo ¯ _ (ツ) _ / ¯.
Ama-Emoji aguqulelwe kwaba ama-meme noma anencazelo ekabili
I-Peach Emojis isetshenziswe kabanzi ukumelela izinqe, ngenxa yokufana okubonwa ngabasebenzisi abaningi. Lokhu kuholele ekutheni aziwe ngele- "maxed out emoticon."
I-Emoji Yenyanga Emnyama ivamise ukusetshenziselwa ukugqamisa incazelo yocansi emshweni. Ukudlala ngothando kusetshenziswa njalo noma njengehlaya locansi.
Abantu abambalwa babheka le Emoji njengokumela umuntu ohonqayo ngolaka. Kodwa empeleni, la mafu amhlophe aphuma ekhaleni afuna ukumelela ukudelelwa, uphawu lokuziphakamisa. Kubonisa umuntu ozidlayo, onqoba omunye.
Le Emoji ivame ukusetshenziselwa ukukhombisa umuntu sengathi uyathandaza, ecela okuthile kuNkulunkulu. Kodwa-ke, empeleni lokho okumelela khona "i-high 5".
Ngingasiza kanjani? Le Emoji ikhombisa owesifazane okufanele aqondise umsebenzisi futhi aphendule imibuzo yakhe. Nokho, ngokuvamile kuye kwaba uhlobo lokubhuqa noma isibindi.
Izigaba I-Emojis Ukuhamba kwethekithi